CDMမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးတဲ့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်း ကို ကျေးဇူး အရမ်းတင် ကြောင်းပြောလာတဲ့ နန်းစုရတီစိုး – Cele Oscar
ပရိသတ်အချစ်တော် နန်းစုရတီစိုးကတော့ CDM မှာပူးပေါင်းပါဝင်ပေးလာတဲ့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ တိုင်းကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲလို ဟေးလား ဝါးလား လုပ်နေလို့ မရကြောင်းအသိပြောကြားလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နန်းစုဟာ ဗီဒီယို ခေတ်က တည်းက အနုပညာလောကထဲ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေ အားပေးထောက်ခံမှုရရှိကာ ယခုအချိန် မှာတော့ နေရာတစ်ခုထိ ရောက်ရှိ အောင်မြင်နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအခါမှာတော့ နန်းစုဟာ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ”Now or Never ?????ငါတို့က CDM တွေ အလုပ်မသွားဖို့ ဆုတောင်းနေသလိုCDM တွေကလည်း ငါတို့ သွေးမအေးသွားဖို့ဆုတောင်းတယ်တဲ့။ဒီစကားလေး ကြားပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသလို CDM လုပ်ပေးနေတဲ့ သူတွေကိုလည်းကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်။သူတို့ ရင်းနှီးထားရတာတွေ အလကားဖြစ်မှာ စိုးရိမ်ကြမှာပဲ။တကယ်ပါ CDM ကို ပူးပေါင်းပါဝင်ပေး လာတဲ့တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်း အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ”
“သွေးအေးလိုက်လို့ မရပါဘူးခြောက်တိုင်းကြောက် ပြီး ပုန်းနေလိုက်လို့ မရပါဘူးပျော်ပွဲရွှင်ပွဲသဘောမျိုး နဲ့ ဟေးလားဝါးလား လုပ်နေလို့လဲ မရပါဘူးအပြောင်အပျက်တွေနဲ့ အာရုံလွှဲလိုက်လို့လဲမရပါဘူးအားလုံးရဲ့ အနာဂတ် အတွက် တိုက်နေရ တဲ့ပွဲပါဒီတစ်ခေါက်မှ မနိုင်ရင် ဘယ်တော့မှ မနိုင်တော့ဘူးဆိုတာလေး ခေါင်းထဲမှာ အမြဲထည့်ထားစေချင်ပါတယ်……” ဆိုပြီး ဖော်ပြလာတာကို ပရိသတ်တွေ အတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်…..။
သတင်းအရင်းမြစ်: Nansu Yati Soe’s FB account
ပရိသတျအခဈြတျော နနျးစုရတီစိုးကတော့ CDM မှာပူးပေါငျးပါဝငျပေးလာတဲ့ တဈဦးတဈယောကျခငျြးစီ တိုငျးကို ကြေးဇူးတငျကွောငျးနဲ့ ပြျောပှဲရှငျပှဲလို ဟေးလား ဝါးလား လုပျနလေို့ မရကွောငျးအသိပွောကွားလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ နနျးစုဟာ ဗီဒီယို ခတျေက တညျးက အနုပညာလောကထဲ ရောကျရှိလာခဲ့ပွီး ပရိသတျတှေ အားပေးထောကျခံမှုရရှိကာ ယခုအခြိနျ မှာတော့ နရောတဈခုထိ ရောကျရှိ အောငျမွငျနပွေီပဲ ဖွဈပါတယျ။
ယခုအခါမှာတော့ နနျးစုဟာ သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှာ”Now or Never ?????ငါတို့က CDM တှေ အလုပျမသှားဖို့ ဆုတောငျးနသေလိုCDM တှကေလညျး ငါတို့ သှေးမအေးသှားဖို့ဆုတောငျးတယျတဲ့။ဒီစကားလေး ကွားပွီး စိတျမကောငျးဖွဈရသလို CDM လုပျပေးနတေဲ့ သူတှကေိုလညျးကိုယျခငျြးစာမိပါတယျ။သူတို့ ရငျးနှီးထားရတာတှေ အလကားဖွဈမှာ စိုးရိမျကွမှာပဲ။တကယျပါ CDM ကို ပူးပေါငျးပါဝငျပေး လာတဲ့တဈယောကျခငျြးစီတိုငျးကိုလညျး အရမျးကြေးဇူးတငျပါတယျ ”
“သှေးအေးလိုကျလို့ မရပါဘူးခွောကျတိုငျးကွောကျ ပွီး ပုနျးနလေိုကျလို့ မရပါဘူးပြျောပှဲရှငျပှဲသဘောမြိုး နဲ့ ဟေးလားဝါးလား လုပျနလေို့လဲ မရပါဘူးအပွောငျအပကျြတှနေဲ့ အာရုံလှဲလိုကျလို့လဲမရပါဘူးအားလုံးရဲ့ အနာဂတျ အတှကျ တိုကျနရေ တဲ့ပှဲပါဒီတဈခေါကျမှ မနိုငျရငျ ဘယျတော့မှ မနိုငျတော့ဘူးဆိုတာလေး ခေါငျးထဲမှာ အမွဲထညျ့ထားစခေငျြပါတယျ……” ဆိုပွီး ဖျောပွလာတာကို ပရိသတျတှေ အတှကျပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျတာ ပဲ ဖွဈပါတယျနျော…..။
သတငျးအရငျးမွဈ: Nansu Yati Soe’s FB account